1. Otu esi eme ka toast nke French na-esi ísì ụtọ, na-atọ ụtọ, ngwakọta zuru oke. Dị oke egwu na ị gaghị akwụsị iri nri
2. Nchịkọta French, ma ọ bụ nke a maara dị ka achịcha tinye akwa, n'ụdị ọdịda anyanwụ dara oke ọnụ. Kedu nke ị nwere ike ịmepụta n'ime desserts dị ụtọ Nke enwere ike ije ozi na nnọkọ oriri Oriri ma ọ bụ dị ka nri Gụnyere ya dị ka nri ụtụtụ nke a ga-eri na mmiri ara ehi, tii ma ọ bụ kọfị, enwere ike ịme ya dị ka eji megharịa ọnụ maka ịnabata n'ehihie. Kedu nke nwere ike ịgwa gị na French tost dị mfe ịme, ma ọ bụrụ na ejiri mkpụrụ osisi ọhụrụ chọọ ya mma, ọ ga-agbakwunye Uru nri Kpamkpam Na mgbakwunye, mgbe a na-eri ya, ọ ka na-enweta ume na ume. Nchịkọta French dịkwa mfe ịme. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị dịghị mma isi nri Plus bụghị ike iji kwadebe Efrata Enwere ike zụta n'ahịa Storelọ ahịa ngalaba Ma ọ bụ mma ụlọ ahịa dị ka mma Ọ bụrụ na ọ dị njikere, ka anyị kwadebe akụrụngwa maka French Toast Berry. Usoro ihe eji eme ihe dika ihe ndia
3. Mpekere 2 nke achịcha gbara ọkpụrụkpụ
4. 2 àkwá
5. 1 iko mmiri ara ehi ohuru
6. Mpekere nnu maka nnu ụtọ ọzọ.
7. Mkpụrụ osisi Berry dị ka blueberries, strawberries, ma ọ bụ ụdị mkpụrụ ọ bụla.
9. Mmanụ aeyụ, dị ka uto gị si dị
10. Obere butter butter
11. Kwadebe ihe oriri Wunye mmiri ara ehi ohuru na akwa n’ime nnukwu efere. Tinye nnu nnu ma tie aka ichikota, ma obu inwere ike iji igwekota.
12. Ghichaa achịcha ahụ n'ime akwa na mmiri ara ehi a kụrụ akụ n'akụkụ abụọ, mgbe nke a gasịrị, kpoo pan ahụ na obere ọkụ ma gbakwunye obere bọta, ma ọ bụ ihe dịka gram 10. Tụgharịa ya iji mee achịcha ahụ ọlaedo na ihe na-esi ísì ụtọ n'akụkụ abụọ. Mgbe achịcha ahụ kwadebere, dozie ya ma mee nke ọzọ.
13. Ekem tinye obere butter na pan. Bee osisi banana ahụ n'ime iko ma gbanye ya na bọta Kedu nke a ga - eme banana karịa ka ọ na - atọ ụtọ
14. Mgbe nke ahụ gasịrị, tinye mpekere achịcha abụọ na efere. Cochọ Mma na tomato Iji mara mma, tinyezie banana n'akụkụ efere ma wụsa mmanụ a honeyụ dị ka achọrọ. Nke ahụ bụ ya, frenchị tozuru ezu.
15. Kedu ka ị mere Na otu esi eme French tost nke enwere ike ime ngwa ngwa, enwere m ike ịsị na ọ dị ezigbo ụtọ. Nakwa menu iji nabata ndị ọbịa Okomoko na ngwongwo ndi di nfe inweta Maka ezumike a, ka anyị mee ka toast nke ndị ezinụlọ maka ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi rie nri ọnụ. Ma bụrụ ezigbo okike nke dabara onye ọ bụla